“Kalmada Tanaasul Ee Uu Isticmaalay Guddoomiye Cirro Waa Sax Qanuunka Doorashada…” Prof Cabdi Cali – somalilandtoday.com
“Kalmada Tanaasul Ee Uu Isticmaalay Guddoomiye Cirro Waa Sax Qanuunka Doorashada…” Prof Cabdi Cali
(SLT-Hargeysa)-Marka laga tago kaftankiisa dacaayadda ah ee uu hoosta ka tuuro had iyo jeer, wuxu caddeeyey in uu ogol yahay horena u ogolaaday natiijada doorashada.
Xagga luqadda haddii aynu eegno, marka Mareykan ama Ingiriiska tartan doorasho ka dhaco, kalmadda uu isticmaalo ninka laga helo doorashada waxa weeye I conceded or I made concession, taas macnaheeduna afka carabiga haddaad ka baadho qaamuusi English-Arabic ah waa tanaasul; Sidaa darteed kalmadda tanaasul ee uu isticmaalay Guddomiye Cirro waa ku sax macnaha ogolaanshada natiijada.
Anigu wali ma maqal, intaan dhegaysanayay wararka doorashooyinka, qofka laga guulaystay oo isticmaalaya kalmadda I accepted, oo macnaheeda tooska ahi yahay waan aqbalay.
Dhinaca kale, haddii qofka laga guulaystay aqbalo natiijada, inkasta oo uu wax tabanayo; taasi waxba u dhimi mayso sharcinimada natiijada; waxaad ogtahay Hillary Clinton-ba in aanay ku qancin natiijadii Trump madaxweynaha ku noqday, oo illaa immika ay ka xun tahay, haddana taasi waxba umay dhimin M/weynennimada Trump, mar hadday ogolaatay natiijadii doorashada.
Waxa kale oo aan idin xasuusin lahaa waxa jiray go’aan maxkamadda sare soo saartay, ka dib markii ay gudbin waayeen wax dacwad ah xisbiyada laga guulaystay muddaddii loogu talagalay, kaasoo ayiday natiijadii Komishanku ku dhawaaqay, sidaa darteed, waxa muuqata in aan halkaas wax lagu sii tiigaalaa ku jirin, ee aynu hore u socono , oo yaaan dib danbe lay noo maqlin innagoo raadkeena dib u raacayna.
Cabdo, U dhaq-dhaqaaqa arrimaha bulshada iyo maamul wanaagga..
Maxay Yihiin Qodobada Dastuuriga Ah Ee Uu Guddoomiye Xirsi Cali Xaaji Xasan Ku Eedeeyey In Jabiyey Madaxwayne Muuse Biixi??
By Wariye December 30, 2021
Qodobada dastuuriga ah iyo xeerarka sharci ee guddoomiye Xirsi Cali Xaaji Xasan soo Taxay ee ku...
Tiktok Oo Sannadkan Kaalinta Koowaad Ka Qaaday Shirkadda Google Oo Heysatay 10 Sanno Oo Xidhiidh Ah
By Wariye December 26, 2021
(SLT-Washington)-TikTok ayaa kaalinta koowaad ee baraha internet-ka loogu isticmaal badan yahay ka qaaday shirkadda Google oo...
“Buuqii Ka Dhacay Golaha Wakiillada, Waa Kaarkii Doorashada Oo…” Dib U Milicso Madaxweyne Biixi Oo Sannadkii 2014-kii Ka Hadlaya Khilaaf Ka Dhex-qarxay Golihii Hore Ee Wakiillada
By Wariye December 19, 2021
(SLT-Hargeysa)-Madaxweyne Muuse Biixi ayaa cahdigii Madaxweyne Siilaanyo dhammaadkii sannadkii 2014-kii mar uu ka hadlayey buuq iyo...
Bulshada La Jaarka Ah Beerta Madaxweyne Biixi Oo WADDANI Ku Biiray
By Wariye November 24, 2021
Diiwaan gelinta codbixiyeyaasha doorashada Madaxtooyada oo la bilaabayo bisha koowaad ee sannadka cusub 2022-ka
By Wariye November 18, 2021
Komishanka Doorashooyinka Somaliland ayaa maanta kulan la qaatay Hogaanka Saddexda Xisbi qaran ee Somaliland. Komishanka Doorashooyinka...